Part 2: Olee otú ihichapu niile akụkọ si iPhone
Nkebi nke 3: Nghoputa: Olee ị na-eche ihe ọzọ?
E nwere ọtụtụ ugboro ị na-eche mkpa nke ihichapụ niile akụkọ ihe mere eme na gị iPhone, ọ pụrụ ịbụ n'ihi na a dịgasị iche iche nke ihe ndị mere Otú ọ dị ihe ndị kasị mkpa na ha niile bụ iji hụ na ị chọrọ nzuzo gị ka nọgidere na-enwe mgbe niile na kwa na ọ dịghị mwute ozi gị nke na-akawanye onye ọ bụla ihe ọjọọ aka.
E nwere ihe ole na ole ị chọrọ ka ihichapụ mgbe nile ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji jide n'aka na gị onwe onye akụkọ ihe mere eme na iPhone mụ onwe n'oge nile na ha na-edepụtara dị ka nyere n'okpuru:
History dị iche iche na ihe nchọgharị weebụ
Keyboard akụkọ ihe mere eme
Ị ga-achọ niile nke ndị a na-ehichapụ site n'oge ruo n'oge ka hụ na ọ dịghị onye maara n'ezie otú i a na-eji gị iPhone ọzọ karịa gị. Ọfọn, tupu ị malite scratching gị isi na-eche echiche otú ime ihe ndị a, ka anyị mee ka ya ibu mfe n'ihi na ị, anyị na-aga na-eso gị ụzọ kasị mma nke ihicha ihe niile akụkọ si gị iPhone. Anyị ga-eji otu nke kasị mma ngwaọrụ dị taa n'ihi nzube a - Wondershare SafeEraser.
Wondershare SafeEraser bụ otu nke kasị mma iPhone nchicha software dị na ahịa taa. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị dị irè ngwa na ị nwere ike iji ka ihichapụ niile gị onwe onye data na a 100% mma na n'ihe ize ndụ free n'ụzọ. Ọ na-abịa nnọọ otu nnukwu ndepụta atụmatụ na-eme ka ọ ọkwá nnọọ elu na ọnụ ọgụgụ nke ịbụ oké ịba uru maka ihe niile iOS ngwaọrụ ọrụ, karịsịa iPhone.
Ebe a bụ ndepụta na a mkpirikpi nke ihe ọ nwere ike ime.
1 Pịa nzacha na mkpocha - SafeEraser na-eme ka ọ dị nnọọ mfe ọcha niile junk na dị nnọọ enyemaka nke a click.
Photo Compressor - Ọ na-enye gị ohere iji mpikota onu foto gị na i weghaara iji iPhone.
Ihichapu Private Data - Ihichapụ niile gị onwe data dịtụbeghị a mfe, ị nwere ike ugbu a hụ na gị na iPhone dere dịghị onye data na niile mgbe a recycled, rere wdg
Ihichapu ehichapụ faịlụ - Na SafeEraser ihe ị na-bụ a technology ji US Military na ya mere ị pụrụ ijide n'aka na ọbụna nwetụrụ metụtara nke ọ bụla na ihe ọ bụla na mbụ ehichapụ data na gị iPhone ga-ehichapu ma si otú mere irrecoverable.
Ihichapu All Data - Ihichapụ niile data na gị iOS ngwaọrụ-enweghị na-weghachi ụlọ ọrụ ntọala ma ọ bụ dịrị ngwaọrụ bụkwa ihe na SafeEraser enye gị ohere ime na dị nnọọ ole na ole nzọụkwụ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, na ndị a na ọtụtụ atụmatụ, Wondershare SafeEraser bụ ịrụ ụka adịghị otu nke kasị mma ngwaọrụ ka ihichapụ gị niile iPhone akụkọ ihe mere eme ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma.
Ugbu a, ka anyị na-anya na otú iji ya dị ka mma.
Nzọụkwụ 1: Malite site na nbudata na wụnye Wondershare SafeEraser na kọmputa gị, pịa ebe a na-eme nke ahụ.
Nzọụkwụ 2: Ozugbo i arụnyere SafeEraser, ẹkedori ya na site na ya isi interface họrọ nhọrọ nke ihichapu Private Data.
Nzọụkwụ 3: The ngwa kwesịrị ugbu a na-amalite ịgụ isiokwu gị iPhone na ya na ị ga-ahụ a ihuenyo dị ka nyere n'okpuru nke na-egosi na Doppler ọganihu.
Nzọụkwụ 4: Mgbe iṅomi zuru ezu, nke ga-a nkeji ole na ole, SafeEraser kwesịrị igosipụta niile nke gị onwe data na ihuenyo. Ị nwere ike kaa ndị ị chọọ ehichapu wee pịa bọtịnụ 'ihichapu Ugbu a'.
Nzọụkwụ 5: SafeEraser ga ugbu a-akpali gị gosi na ị n'ezie chọrọ niile nke data ehichapụ dị ka họrọ, otú pịnye ke 'ihichapụ' ebe ọ jụrụ gị.
Nzọụkwụ 6: Ozugbo data na-ehichapụ, ị ga-ahụ a na windo na-bụ yiri onye e gosiri n'okpuru.
E ị na-aga, na-eji n'elu nzọụkwụ na Wondershare SafeEraser ugbu a, ị pụrụ ijide n'aka nke eziokwu ahụ niile gị onwe data bụ zuru mma na ihe ọ bụla n'akụkọ ihe mere eme nke gị iPhone ojiji na-kpamkpam ehichapụ.
Oge maka a ngwa ngwa nghoputa; nke otu n'ime ndị a data akụkọ ị na-echegbu onwe ha banyere ihe na gị iPhone ma na-achọ ehichapụ kasị?
> Resource> Ihichapu> Olee ihichapu iPhone History